211Aluminium titanium aluminium, Ti2AlC - Goodao Technology Co., Ltd.
MAX wajiga walxaha waa nooc cusub oo walxaha dhoobada wax lagu kala qaado ah oo si weyn looqiyaasto .Qacida kiimikada asaasiga ahi waa M (n + I) Axn. J: Jirrooyinka A iyo VA waxay ka kooban yihiin qaybaha ugu muhiimsan X: nitrogen kartoor.
MAX wajiga walxaha waa nooc cusub oo walxaha dhoobada wax lagu kala qaado ah oo si weyn looqiyaasto .Qacida kiimikada aasaasiga ah waa M (n + I) Axn. J: Jirrooyinka A iyo VA waxay ka kooban yihiin qaybaha ugu muhiimsan X: nitrogen kartoor. Qaab-dhismeedka madadaalo ee nano-lakabka ah ee maaddada wejiga MAX wuxuu awood u siinayaa inuu isku daro sifooyinka wanaagsan ee birta iyo dhoobada, sida habdhaqanka sare, iska caabinta heerkulka, adkeysiga qiiqa, shucaaca iska caabbinta daxalka, ete. Waqtigan xaadirka ah, noocyada maaddooyinka ayaa si ballaaran loogu isticmaalay narlion, biosensors, ion screening, catalysislithium ion baytariyada, supercapacitors, dhoobada heerkulka sare iyo goobo kale oo badan.
Caanaha molecular Ti2 AIC
Koodhka CAS 12537-81-4e
Sharaxaad budada cawl-madow
Barta dhalaalida 2000 t
Miisaanka jirka 195 .7
ISTICMAALO Max ugu badan qalabka dhoobada, qalabka elektarooniga ah, heerkulka sare ee qalabka qalabka burushka korontada, walxaha kiimikada lidka ku ah iyo kuleylka heerkulka sare
Titanium-aluminium carbide (TI-Al carbide) waa nooc cusub oo ka kooban seddex lakab oo dhoobada dhoobada ah, maaddada, taas oo ay si weyn uga walaacsan yihiin saynisyahannada maaddada iyo fiisikisyadu sababo la xiriira sifooyinkooda gaarka ah.
Titanium aluminium carbide (Ti2AlC) wuxuu iska leeyahay nidaamka muraayadaha laba-geesoodka ah, wuxuuna leeyahay astaamaha birta iyo dhoobada: waxay leedahay isku wada socodsiinta iyo kuleylka kuleylka sida birta, laakiin sidoo kale waxay leedahay isku mid laastikada sare ee laastikada ah iyo heerkulka heerkulka sare ee farsamooyinka wanaagsan , oo leh habdhaqan wanaagsan iyo karti kuleyl, modulus laastik sare iyo adkaansho Vickers oo hooseeya, iyo awood caabbinta waxyeello wanaagsan.
Waa lagu shaqeyn karaa heerkulka qolka waxayna soo saari kartaa cillad caag ah oo heerkulka sare ah.Waxa kale oo ay leedahay xasilooni heerkul sare oo wanaagsan iyo u adkeysiga qiiqa. Waxa kale oo ay leedahay iska caabin heerkul wanaagsan oo kuleylka ah, iska caabinta dhaawaca iyo u adkaysiga daxalka kiimikada.
MAX dhoobada wajiga (oo ay ku jiraan Ti3SiC2, Ti2AlC, iwm.) Waa nooc cusub oo dhoobada wax lagu socodsiiyo oo la maareyn karo ah. Dhoobadaani waxay ka kooban yihiin in kabadan lixdan carbides ternary ama nitrides. M wuxuu u taagan yahay birta hore ee kooxda kala-guurka; A wuxuu matalaa cunsurrada kooxda ugu weyn, inta badan canaasiirta kooxda saddexaad iyo kooxda afraad; X waxaa loogu talagalay kaarboon ama nitrogen. Ti3SiC2 waa tan ugu ballaaran ee la barto. Ti3SiC2 waxaa si habsami leh u soosaaray culeys kulul sanadkii 1996 waxaana soo saaray borofisar Barsoum M oo ka tirsan jaamacadda Drexel University ee dalka Mareykanka waxaana laga helay agabkiisa wanaagsan. Sababtoo ah qaabdhismeedka muraayadda nanometer-ka ee gaarka ah, noocan ah waxyaabaha dhoobada leh ayaa leh astaamo sida caabbinta oksidation, is-saliidaynta, jabka sare, adkaanta heerkulka qolka iyo ku-habeynta. Waxyaabaha noocan ah waxaa loo isticmaali karaa si heer sare ah maadada qaabdhismeedka, qalabka burushka koronto, walxaha kiimikada lidka ku ah iyo qalabka kululaynta heerkulka sare. Wax soo saarka waxaa inta badan loo isticmaalaa daahan heerkulka sare, MXene precursors, tabinta is-saliidda tabinta, baytariyada lithium ion, supercapacitors, catalysis elektaroolka.
Xuduudaha farsamada ee Ti2AlC:
farsamohanti Awood cadaadis （MPa） 764
kuleylkaguryaha isku dheelitirka balaarinta kuleylka balaadhinta kuleylka （10﹣6K ﹣ 1） 9.0
Hore: Titanium Hydride Powder, TiH2
Xiga: Titanium Stannum carbide, Ti2SnC